Al-shabaab oo sheegatay Qaraxii lagu Dilay Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga – Radio Daljir
Al-shabaab oo sheegatay Qaraxii lagu Dilay Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga
Febraayo 16, 2016 12:00 g 0
Somalia, 16, February, 2016-(Daljir)_Xarakada Al-shabaab ayaa Sheegtay inay mas’uul ka ahayd Weerarkii Qarax ee lagu dilay Wasiirkii hore ee Difaaca Xukuumaddii KMG-ka ahayd Soomaaliya, Muxyadiin Maxamed Xaaji Ibraahim oo shalay ku dhintay Qarax loogu xiray Garigiisa.
Afhayeenka hawlgallada ee Al-shabaab, Sh. C/casiis Abu-Muscab oo Wakaalada Wararka ee Reuters la Hadlayay ayaa Sheegay in Muxyadiin Maxamed oo Sannadkii 2008-dii ahaa wasiirkii difaaca dowladdii KMG-ka ahayd ee Somalia ay ku dileen qarax gaarigiisa loogu xiray.
Sidoo kale, Ruux gaariga saarnaa ayaa Waxaa soo gaaray dhaawac fudud, Waxaana qaraxa lagu dilay marxuum Muxyadiin Xaaji oo ka Tirsanaa Madaxda sare ee xisbiga Siyaasadeed ee Kulan ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska Lamabar Afar ee Magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Muxyadiin Maxamed Xaaji uu ahaa la taliyaha gaarka ah ee Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, iyadoo Ra’iisul Waasaraha Somalia uu Amar ku bixiyay in Cadaaladda la Hor-keeno Kooxihii ka dambeeyay dilka marxuumka.
Inkastoo, aanay Hay’adaha Amniga Dowladda Somalia aysan weli sheegin inay u qabteen dad lagu tuhmayo dilka Marxuumka ayaa haddana; waxaa ciidammo ka tirsan kuwa DFS oo gaaray goobta uu Qaraxu ka dhacay shalay waxay qab-qabteen dhowr qof oo marayay meel ku dhow halka uu Qaraxu ka dhacay.
Ugu dambeyn, Al-shabaab ayaa waxay tan iyo markii ay Muqdisho isaga baxeen sannadkii 2011-kii ka geysteen Magaalada Muqdisho Qaraxyo ay qaarkood si gaar ah ula beegsadeen Hoteello iyo Xarumaha Dowladda Somalia sida dhismaha Baarlamaanka Soomaaliya.
8,000 oo Qaxooti Somali ah oo ka soo Laabtay Kenya
DHAGAYSO:Puntland iyo Midowga Yurub oo wada-furay wajiga Labaad ee Mashruuca waxbarashadu waa IFTIIN